မုန့်ဖုတ်ခြင်းမရှိဘဲနာနတ်သီးနှင့်အတူ Cheesecake - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ မုန့်ဖုတ်ခြင်းမရှိဘဲနာနတ်သီးနှငျ့အတူ "Cheesecake - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
မုန့်ဖုတ်ခြင်းမရှိဘဲနာနတ်သီးနှင့်အတူ Cheesecake - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
အဆိုပါ cheesecake ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ပျော့ texture နှင့်၎င်း၏အရသာတွန်းလှန်၏များစွာသောလူအရမျးနှစျတဲ့ကိတ်မုန့်သည်။ ကျနော်တို့ရိုးရာစာရွက်တစ်ခုဆန်းသစ်အခြားရွေးချယ်စရာရှာဖွေတွေ့ရှိရန်သင့်အားပူဇော်ဘယ်အများဆုံးဆက်ဆက်မိသားစုတစ်စုလုံးကိုနှစ်သက်။ ဒီစာရွက်၏ပျေါလှငျတစ်ခုမှာ၎င်း၏မယုံနိုင်စရာအရသာထက်ကျော်လွန်ပါကကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန်ရိုးရှင်းသောသည်နှင့်မီးဖို၏မလိုပါကြောင်းကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကနောက်ဆုံးအချက်ပူတဲ့ရာသီဥတုမှာအလွန်မြင့်မားသိသာသည်။ သင့်ရဲ့မီးဖိုမသုံးဘဲနာနတ်သီးနဲ့ cheesecake ပြင်ဆင်ထားရန်မည်သို့မည်ပုံနှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲရှာဖွေပါ။ သင့်ရဲ့ခါးစညျးရှေ့ဖုံးပါ!
မုန့်ဖုတ်ခြင်းမရှိဘဲနာနတ်သီးနဲ့ cheesecake အဘို့အကြော်
သင်ဒီမှာတွေ့ပါစာရွက်အလွန်အလင်းသည်မဟုတ်, ကအရသာဖြစ်ပါသည်။ သင်တန်း၏, သငျသညျသည်းမခံသော gluten လျှင်, သင်စာရွက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နိုင်ပါတယ်။ Ditto သင်တစ်ဦးအချိုပွဲကျန်းမာပြင်ဆင်ထားရန်လိုလျှင်။ ဤဆောင်းပါး၏အဆုံးမှာသင်ဤကိစ်စတှငျအခြို့သောအကြံပြုချက်များကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ထို့ပြင်အဆိုပြုထားစာရွက်အထူးတစ်ဇွန်း, အရက်တစ်အရိပ်အမြွက်ပါဝင်သည် ရမ်။ သင်သည်သင်၏အချိုပွဲသားသမီးတို့အဘို့ကပိုသင့်လျော်သည်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီအဆင့်ကိုကျော်သွားလို့ရပါတယ်; ဒီမျှလမ်းအတွက်စာရွက်၏အရသာအရသာအကျိုးသက်ရောက်စေပါလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့ခါးစညျးရှေ့ဖုံးပါ!
ခြေရင်း (မှို 15 စင်တီမီတာ) အတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းများ
2 packet ကိုမာရီယာဘီစကွတ်သို့မဟုတ်အလားတူဘီစကွတ်
1 /2ခွက်ကိုထောပတ် (125 ml) အရည်ကျို
200 နို့ဆီ ml
150 ml ဒိန်ချဉ်အုန်းသီး
200 ml ကိုအရည်မုန့်
၏ 200 ဂရမ်နာနတ်ပင် စည်သွတ်နှင့်အသေးစားကိုအပိုင်းပိုင်း
14 ပါ g အရသာမရှိသော gelatin
1 ဇွန်းအဖြူရမ် (optional)
သင်ဒိန်ချဉ်အုန်းသီးကြိုက်နှစ်သက်ဘူးဆိုရငျ, အစားသဘာဝအဒိန်ချဉ်ကိုသုံးပါ: သတိပြုပါ။
မုန့်ဖုတ်ခြင်းမရှိဘဲနာနတ်သီးနှင့်အတူ cheesecake ၏ပြင်ဆင်မှု
ဒါဟာအချင်းတစ်ဖြုတ်မှို 15 စင်တီမီတာပြင်ဆင်ထားရန်ပထမဦးဆုံးလိုအပ်ပေသည်။ ဤထောပတ်မှိုသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်သင်တို့သည်လည်းဖယောင်းစက္ကူနှင့်ဖုံးနိုင်ပါတယ် ... အဆိုပါရွေးချယ်မှုကိုဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်။
ထို့နောက်မာရီယာဘီစကွတ်သို့မဟုတ်အလားတူဘီစကွတ်ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်ခြင်းနှင့်အရည်ပျော်မှုထောပတ်နှင့်အတူရရှိလာတဲ့အမှုန့်ရောမွှေပါ။ မှိုပေါ်အရောအနှောကိုပျံ့နှံ့: ကနာနတ်သီးနှငျ့သငျ့ cheesecake ၏အခြေခံဖြစ်လိမ့်မည်။
ပန်းကန်ထဲမှာ, မုန့်ဒိန်ခဲရိုက်တယ်။ အဆိုပါရည်မှန်းချက်အပျော့နှင့်အ spongy texture ရရန်ဖြစ်ပါသည်။
ယင်းဒိန်ချဉ် Add နှင့်နို့ယူသွား။ နောက်တဖန်ရိုက်တယ်။
ချက်ချင်းဒိန်ချဉ်, ဒိန်ခဲ, နို့ဆီ, နာနတ်သီးတုံးများနှင့်ဇွန်းရမ်မွှေပေးပါ။
ပြင်ဆင်မှုအတွက်မုန့် Add နှင့်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ရောမွှေပါ။
ယခင်ကအထုပ်အပေါ်အကြံပြုချက်များတွင်အောက်ပါတို့က hydrated အဆိုပါ gelatin ထည့်ပါ။ အဆိုပါအဆာလေကောင်းလေမဆုံးရှုံးပါဘူးဒါကြောင့်ကျန်းမာသန်စွမ်းလှုပ်ရှားမှုများကိုဖျော်ဖြေခြင်းဖြင့်ထည့်သွင်းဖို့သတိရပါ။
ဒါဟာအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ခြင်းနှင့်အစာစားခြင်းမပြုမီအချို့သောနာနတ်သီးချပ်နှင့်သင်၏အရသာ cheesecake ကိုအလှဆင်ထက်ပိုမိုပြုလိမ့်မည်။ အစာစားချင်စိတ်ဘွန်!
ဤဆောင်းပါးသည်သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်: ရိုးရှင်းခြေလှမ်းများအတွက် iced တစ်ဦးစတော်ဘယ်ရီကိတ်မုန့်အောင်လုပ်နည်း
ဟာ Celiac disease နှင့်အတူလူများအတွက်သင့်လျော်သောဖုတ်ခြင်းမရှိဘဲ cheesecake များအတွက်တစ်ဦးကစာရွက်
သင်က coeliacs များအတွက်သင့်လျော်သောဖုတ်မရှိဘဲအရသာ cheesecake ပြင်ဆင်ထားရန်ဖြစ်နိုင်သမျှခဲ့သိပါသလား, ထိုသည်းမခံသောလူတို့အားပြောဖြစ်ပါတယ် ကစီဓာတ် ? အနည်းငယ်အခြေခံပါဝင်ပစ္စည်းများပြောင်းလဲ gluten-အခမဲ့အခြားနည်းလမ်းများအတွက်ရွေးချယ်။
အထက်ပါစာရွက်အလွယ်တကူအဆင်ပြေအောင်နိုင်ပါတယ်: သငျသညျရိုးရှင်းစွာ gluten-အခမဲ့ဘီစကွတ်ကိုရွေးချယ်ပါနှင့်ရေနှင့်အတူငယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့ cheesecake ၏အခြေခံဖြစ်လိမ့်မည်။
BASO မပါဘဲ 1 /2ကီလိုဂရမ်မုန့်ဒိန်ခဲ
1 ခွက်ကို သကြား (100 ဂရမ်)
2 ဇွန်းနို့ (30 ဂရမ်) ယူသွား
1 /2cornstarch (7 ဂရမ်)
နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရနာနတ်သီးသို့မဟုတ်နာနတ်သီးတုံး၏ 100 ဂရမ်
ဒါဟာအရသာ cheesecake ခံစားမတိုင်မီအနည်းဆုံးနှစ်ခုများအတွက်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာသင့်ရဲ့ပြင်ဆင်မှုစောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်။
သင်သည်သင်၏အချိုပွဲတစ်ဦးထက်ပို spongy texture ရှိပါတယ်ချင်တယ်ဆိုရင်, ကိတ်မုန့်အမျိုးအစားကိုရွေးပါ jellyroll သင့်ရဲ့ cheesecake များ၏အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်သည်။
ယင်းမုန့်တက်အောင်မနိုင်ပါသလား? နှင်တံမြှင့်ရှေ့တော်၌တဆယ်မိနစ်ရေခဲသေတ္တာထဲမှာမုန့်ကိုတင်: ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူအကျွန်ုပ်တို့၏နည်းနည်းလှည့်ကွက်မျှဝေပါ။ ဒီလှည့်ကွက်နှင့်အတူ, သငျသညျပိုကောင်းတဲ့ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုရရှိရန်စီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မယ်။ ကတုန်းပဲယူမပါဘူးဆိုရင်, သကြားတစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးဇွန်းထည့်ပါ။
သင်စာရွက်များ၏ကယ်လိုရီစားသုံးမှုကိုလျှော့ချလိုလျှင်သင်သည်ရေနှင့် humidifierez တခြားဆင်းရဲတဲ့ဘီစကွတ်ကယ်လိုရီများကမာရီယာ cookies များကိုအစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ အလားတူပင်, သင်ကအလားတူဒိန်ခဲနည်းပါးလာကယ်လိုရီနှင့်အတူမုန့်ဒိန်ခဲကိုအစားထိုးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့သကြားစားသုံးမှု၏နို့ဆီထည့်သွင်းရှောင်ရှားခြင်းနှင့်ဒိန်ချဉ်နှင့်အတူကအစားထိုးလိုက်ပါ။
သငျသညျမုန့်ဖုတ်မပါဘဲကျွန်ုပ်တို့၏နာနတ်သီး cheesecake ၏ဘယ်လိုထင်သလဲ ဒါဟာရိုးရှင်းစွာအရသာဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်မဟုတ်လော ပြင်ဆင်မှုအနည်းငယ်အချိန်ယူသော်လည်းပြင်ဆင်ထားရန်အလွန်လွယ်ကူတစ်အချိုပွဲပါပဲ။ စတင်ရေးသားရန်!
ဤနေရာတွင်လိမ္မော်ရောင်တစ်အရသာကိတ်မုန့်စာရွက်ရှာဖွေပါ။ သင်ဤစာရွက်ပြင်ဆင်ထားရန်အသုံးပြုလိမ္မော်အမျိုးအစားနောက်ဆုံးရလဒ်ဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ Read more »
သွေးအားနည်းရောဂါကုသရန်4တာဟာ - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ